Indlela Yokuqoqa Nokulungisa I-Nick Hickory Yokutshala
Izilwane kanye nemvelo Ukutshala & Ukuphakama kwamahlathi
Indlela Yokuqoqa Nokulungisa I-Pecan noma i-Hickory Nut yokutshala
Emakhokheni angu-12 noma aseMelika , i-shellbark kanye ne-shagbark izihlahla ze-hickory zibonise isithembiso esithile njengabakhiqizi bezinhlobo ezidliwayo. Lezi yizinhlobo ezimbili kuphela zeCarya (ngaphandle kwe-pecan, igama lesayensi leCarya illinoensis ) elivame ukutshala ukukhiqizwa kwe nut. Zonke iziphakamiso zomuthi ezilandelayo ze-hickory ziyasebenza ekuqoqweni nasekulungiseleleni ama-pecans.
Izimbali ezinama-hickory entwasahlobo futhi ziqedela ukuvuthwa kwe-nut ekuqaleni kokuwa.
Kusukela ekuqaleni kokuqala kukaSeptemba nokuqhubeka ngoNovemba, izinhlobo ezahlukene zezintambo zokuvuthwa zivuthwe futhi zikulungele ukuqoqwa. Izinsuku ezikhulayo zingashintsha kancane kancane unyaka nonyaka futhi zivela kumbuso ukuze zisho ngamasonto amathathu kuya kwamane, okwenze kube nzima ukusebenzisa izinsuku zangempela ukucacisa ukuvuthwa.
Isikhathi esihle sokuqoqa amantongomane ama-hickory, noma esivela esihlahleni noma emhlabathini, yilapho eqala ukuwa-nje lokho kulula. Ukuqokwa kwenhloko kuphelile ngoSepthemba ngeviki lokuqala ngoNovemba, kuye ngokuthi yiziphi izinhlobo zemithi yama-hickory kanye nendawo yayo ngaphakathi kwe-United States. I-nut hickory iphelele lapho ama-husks eqala ukuhlukanisa.
Ukuphakama kwesitshalo se-hickory ehlathini elisehlathini futhi ilanga lehlathini elinyene ngezansi lingenza kube nzima ukuba umqoqi oqoqayo abuthe izinamba eziningi (nakuba kungenakwenzeka). Enye inselelo ukuvuna amantongomane ngaphambi kokuba kutholakale ama-wildlife.
Enye into okufanele uyikhumbule ukuthi ukutholakala komkhiqizo akukaze kunikezwe ngonyaka. Izitshalo ezinhle kakhulu ezibizwa ngokuthi i-mast) yazo zonke izinhlobo zezinhlobo zikhiqizwa ngezikhathi zeminyaka eyi-1 kuya kwemi-3 ngakho ukuthola amantongomane kungaba yinselele kunoma iyiphi inkathi yokuwa.
Ngalokho engqondweni, thola izihlahla zehlathi ezivulekile ezikhulayo nehlathi elingaphansi.
Izihlahla zendawo noma izindawo ezipakiwe zisiza ekuqoqeni lapho ama-hickories akhona ezindaweni zasemadolobheni nasezindaweni zasemadolobheni. Imithi ekhethwa ngale ndlela futhi yenza ukuthi kutholakale izinhlobo ze-nut ezilula. Hlala ubona umuthi nendawo yokubeka noma ubeke izikhwama ukuze wazi ukuthi yiziphi izinhlobo oziqoqe.
Ukuhlolwa kwesitoreji nge-pecan kanye ne- shagbark hickory kubonise ukuthi ama-hickories afana nezinye izinhlobo eziningi ze-nut / acorn lapho kufanele zomiswe endaweni encane yomswakama futhi zifriji uma zingalinywa ngokushesha.
Ukuze ucacise, amantongomane kaCarya kufanele abe omisiwe angaphansi kuka-10% umswakama futhi agcinwe cishe ku-40 ° F. Uma igcinwe ezitsheni ezivaliwe, amantongomane kufanele akwazi ukugcina kahle iminyaka emibili ngaphambi kokulahlekelwa isigamu kuya kokubili kwezintathu zamakhono abo okuhluma emva kweminyaka emine.
Beka amanothi omisiwe we-hickory esikhwameni seplastiki ye-polyethylene - ubukhulu bodonga lwamamitha amane kuya kwayishumi - nomxube we-peat mix noma i-sawdust. Lezi zikhwama zingcono ukugcina amantongomane njengoba zigcwele amandla e-carbon dioxide kanye ne-oksijeni kodwa zingenakukwazi ukumswakama. Vala isikhwama ngokukhululekile bese ugcina esiqandisini emazingeni angu-40 kuze kube yilapho uhlwanyela isikhathi. Hlola amantongomane phakathi nobusika futhi ugcine nje ucebile.
Ezinye izinhlobo ze-nut zidinga ukuklanywa noma isikhathi esibandayo sokuthuthukisa ngokugcwele inqubo yokuhluma .
Kucatshangwa ukuthi lezi zidakamizwa zidinga ukushisa kakhulu ngenkathi egcwele kodwa izifundo zibonisa ukuthi ukuqina kungathuthukiswa ngokufaka amantongomanzi ngamanzi ngo-70 ° F ngamahora angu-64.
Ungatshala amantongomane angenawo amaqanda ekwindla bese uvumela isikhathi sebusika senze ukuthi imvelo yenzani - ifriji. Ungaphinda uhlume-uhlwanyela ngezinhlamvu ezihlanjululwe noma ezibandayo noma uthathe inzalo kwi-seed unstratified.
Ukutshala umhlabathi: imiphumela emihle ibike ngokuwa kwenhlanyelo yokuhlwanyela i-hickory, kodwa kudingekile ukuthi kulungiswe kahle. I-mulch kufanele ihlale kuze kufike ukuhluma . Ngokuvamile ukudayiswa akudingekile, kodwa ama-hickory angase azuze emthunzini othile wokuqala. Ukuvikelwa kusuka kumagundane kungadingeka ukuwa-ukuhlwanyela.
Ukutshala iziqukathi: Emva kokunquma isikhathi esifanele sokutshala njengoba kuxoxwa ngaphambili, kufanele ubeke amantongomane enhlabathini ngendlela yokulinganisela ekhululekile emigodini eyodwa noma emigodini ejulile.
Umcibisholo wempompi uzokukhula ngokushesha kuze kube ngaphansi kweziqukathi kanye nobubanzi bezingcambu akubalulekile.
Iziqukathi kufanele zibe nezimbobo ezansi ukuze kuvumeleke amanzi. Faka izintambo zezinyosi ezinhlangothini zazo ngokujula kwesigamu kuya kobubanzi be-nut. Gcina inhlabathi enomswakama kodwa hhayi emanzi. Gcina "izimbiza" ngokuqandisa.
Ukutshala i-Dogwood yezimbali eYard Yakho
Qaphela kabusha ukutshala i-Pin Oak ku-Yard yakho
Ukuqoqa nokulungiselela Imbewu yeSikhamere Yokutshala
Qaphela kabusha ukutshala i-Maple yase-Norway eYard Yakho
Cabanga ukutshala i-Oak e-Yard yakho
Okusemqoka kokusakazwa kwembewu yesigodi
Ukutshala Isihlahla Esiyisisekelo - Imibuzo Ebuzwa Ngokuphindaphindiwe
UMfula i-Birch Ungumuthi WaseJard Othandekayo eNingizimu Yase-US
Indlela Yokutshala I-Acorn futhi Ukhule Umuthi Wokhuni
Cabanga ngokutshala i-Mimosa eYard Yakho
'Umdlalo Omkhulu Kunazo Zonke Uke Wadlala' Utshela i-Famous Underdog Golf Story
Ukudweba kwabaqalayo: Ungaqala kanjani
I-Inside Scoop e-Watergate Scandal
UBhatsheba WayengumKhosikazi Oyinkosikazi KaDavide
Ikhishwe nguGordon Korman
U-2016 I-Canoe / Kayak e-Olympic eRio de Janeiro
I-Smart Parts Ion
University of Tennessee kuMartin Admissions
Incazelo Ephezulu kanye Nezibonelo
Izono eziyisikhombisa ezibulalayo ku-Theory and Practice
Ingabe Wena ngokwakho Isikebhe solimi lweTrailer Ukhulisa
10 Abagibeli Abahle Abangakaze Babone I-Masters Tournament
Amaqiniso kaMeitnerium - Mt noma Element 109
I-Health Care System E-US
Amakhophi amaHillary Clinton ayimpofu
Amathrekhi Ayishumi Amakhulu AseMonica
I-Biographical Profile of Philosopher Rene Descartes
Amathiphu aphezulu ayishumi okuthenga i-Car Used Used Certified Pre-owned
I-JUNG - Igama Lomsebenzisi Nomsuka
Ubani owafaka Microchip?
Izitayela ezingavamile: Kusukela ku-H kuya ku-S
Izindwangu zokukhiqiza kusuka koboya